Natiijadii kasoo baxday Baaritaanka Caafimaadka ee Donald Trump oo la shaaciyey [Muxu qabaa..?] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Natiijadii kasoo baxday Baaritaanka Caafimaadka ee Donald Trump oo la shaaciyey [Muxu qabaa..?]
Dhakhtarka gaarka ah ee madaxwayne Donald Trump ayaa wariyayaasha u sheegay in caafimaadka madaxwaynaha uu wanaagsan, kadib baaritaankii caafimaad ee ugu horreeyay ee lagu sameeyay.
Admiral Ronny Johnson ayaa sheegay in baaritaan caafimaad oo dhanka maskaxd ah uu ku sameeyay madaxwaynaha taasi oo uu codsaday Mr Trump islamarkana natiijada ka soo baxday ay tahay gabi ahaanba mid cadi ah.
“Ma jiro wax walaac ah oo aan ka qabo awoodiisa dhanka maskaxda iyo qaabka ay u shaqeeyaan neerfooyiinkiisa,” ayuu yiri Ronny Jackson. Todobaadkii aanu soo dhaafnay ayaa waxa madaxwayne Trump oo 71 jir ah lagu sameeyay baaritaan caafimaad oo qaatay saddex saacadood.
Dhakhtarka gaarka ah ee madaxwaynaha Ronny Jackson oo saxaafada kula hadlayay aqalka cad ayaa sheegay in caafimaadka madaxwaynaha uu yahay mid wanaagsan. “Dhammaan macluumaadka waxa ay muujinayaan in madaxwaynaha uu caafimaad qabo uuna sii ahaan doono mid caafimaad qaba inta muddada xilkiisa.
Waxa jiray su’aalo la iska waydiinayay caafimaadka dhanka maskaxad ee madaxwaynaha ka dib markii uu soo baxay buug laga qoray aqalka cad iyo madaxwayne Trump.
Sida ku cad buugga uu qoray Michael Wolff, dhammaan shaqaalaha aqalka cad ku sugan waxa ay madaxwaynaha u arkaan sida qof “caruur ah”.
Mr Trump oo ka jawaabayay arrintan ayaa ku tilmaamay buugga uu qoray Mr Wolff mid “Been ay ka buuxdo “. Sidoo kale xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa beeniyay in maskaxiyan caafimaadka madaxwaynaha uusan wanaagsanayn
Previous articleSAWIRRO XUL AH: Soo dhoweyntii Madaxweye Farmaajo ee Magaalada Dhuusamareeb
Next articleTurkiga oo Qarka u saaran inuu Dagaal ku qaado Ciidamada uu Mareykanku taageero ee Suuriya